Sawiro: Madaxweynaha Galmudug oo Muqdisho ka sameeyey tallaabo horey loogu yaqaanay Gaas iyo Faroole - Caasimada Online
Home Warar Sawiro: Madaxweynaha Galmudug oo Muqdisho ka sameeyey tallaabo horey loogu yaqaanay Gaas...
Sawiro: Madaxweynaha Galmudug oo Muqdisho ka sameeyey tallaabo horey loogu yaqaanay Gaas iyo Faroole
Waxaa Shalay Magalada Muqdisho soo gaaray Madaxweynaha cusub ee Galmudug loo doortay Axmed Ducaale Geelle Xaaf, wuxuuna sameeyey arrin la mid ah middii ay Gaas iyo Faroole ka sameeyeen Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Madaxweynaaha Cusub ee Galmudug Xaaf ayaa garoonka diyaaradaha Muqdisho kala soo dagay Ciidamo wato hubka fudud, midaasna waxay aheyd calaamad horey loogu yaqaanay Madaxweynaha Puntland Gaas iyo Faroole.
Madaxweynaha waxaa garoonka Aadan Cadde ku soo dhoweeyay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Federaalka, waxaana la arkaayay ciidamo kasoo degay diyaaradii uu a socday intii aanu Xaaf soo dagin, midaas waxay keentay hadal heyn badan.
Waxaa la filayaa inuu kulamo kala duwan la yeesho madaxda dowladda Federaalka, iyadoo la isu diyaarinayo shirka arrimaha Soomaaliya ee magaalada London oo uu ka qeybgeli doono madaxweynaha Galmudug.
Tallaabadaan ayaa waxaa si weyn uga hadlay ayaa noqoneyso mid iska bareejeesay ficiladii ay horey us sameeyeen Gaas iyo Faroole, waxayna noqoneysaa Mas’uuliyad darro iyo is aaminad la,aan.
Haddab halkaan hoose ka daawo sawirada